Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo shaqo joojin ku sameeyay Xaashi Cilmi Nuur (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo shaqo joojin ku sameeyay Xaashi Cilmi Nuur (AKHRISO)
Warqad qoraal ah oo kasoo baxday xafiiska guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Ibraahim Iidle Saleebaan ayaa lagu sheegay in shaqdii laga joojiyay guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Xaashi Cilmi Nuur.
Warqadaan oo ku saxiixan gudoomiyaha maxkamada sare ee dalka Ibraahim Iidle Saleebaan ayaa lagu sheegay in sababta shaqo joojinta loogu sameeyay guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ay tahay shaqada maxkamadaasi oo aanu u socon sidii loogu talo galay, islamarkaana ay jiraan dacwooyin badan oo isku dul xayiran oo ilaa iyo haatan aan waxba laga qaban.
Sidoo kale, si rasmi ah warqada looguma sheegin xilliga rasmiga ah ay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir shaqada ugu eg-tahay, iyadoona aysan jirin wax hadal oo kasoo baxay guddoomiyaha shaqo joojinta lagu sameeyay.
Dhinac kale, dadka ku nool gobolka Banaadir ay dhowr jeer hore cabsho ka keenay garsoorka dalka oo ay ku sheegeen inaysan si cadaalad ah u qaadin kiisaska dacwadaha ku saabsan, iyadoona dadka badankood ay aaminsan yihiin in xil ka qaadistaan lagu sameeyay guddoomiyahaasi aanay wax ka badalaynin nidaamka ay ku shaqeeyaan garsoorka dalka.
Hadaba nuqul ka mid ah warqada qoraalka ah oo nasoo gaaray ayaa u qoran sidatan:-